Nicolas Haysom oo aan kusoo laaban doonin shaqadii uu ka hayay Soomaaliya, isagoo qof cusub uu badalayo – Radio Daljir
Janaayo 5, 2019 5:56 b 0
Afhayeenka QM Farxaan Xaq ayaa sheegay wakiil cusub QM inay usoo magacaabi doonto Soomaaliya, kadib go’aankii Persona Non Grta ee ay dowladda faderaalka Soomaaliya ay kusoo rogtay wakiilka QM Nicolas Haysom oo ah inaan dalka laga rabin.
Farxaan Xaq ayaa sheegay QM inay sii wadi doonto taageeridda Soomaaliya, waxaana uu xusay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo magacaabayaan wakiil cusub.
Nicolas Haysom ayaa wasaaradda amniga ee dowladda faderaalka Soomaaliya u diray qoraal uu uga dalbanayo rabshadihii kadhacaymagaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay iyo xariga hogaamiye kuxigeenkii hore Al-Shabaab Mukhtaar Roobow.
Dowladda ayaa ku eedaysay ergayga inuu kusoo xad gudbay madaxbanaanida Soomaaliya oo uu faragalin ku sameeyey arrimaha gudaha.
Ma is tiri xabad kalluun ah ayaa sadex milyan ka badan lagu iibsan karaa?